SKateBOARD na LEVITATION VEHICLES, OMgbọ njem TOMORROW - AFRIKHEPRI
Iji mepụta mmetụta nke levitation site na ịmalite imebiga ihe ókè, otu isi na-agụnye ihe ndị na-achịkwa (dịka ihe niobium na titanium dịka ọmụmaatụ) ma ọ dịkarịa ala otu magnet chọrọ. Anyị ga-ajụkwa oyi. Mgbe mgbochi ahụ ruru -200 Celsius C, na-emekarị site na kọntaktị na mmiri mmiri na mmiri, ọ na-eme ka ọ dị elu, ya bụ na ọ ga-efunahụ ya kpamkpam. Na magnet na-abanye na levitation n'ihi na superconductor na-emepụta ogwe magnet megidere nke magnet: ọ bụ Meissner mmetụta. Elu elu dị elu na-adabere na ịdị arọ na ikike magnet nke magnet.
Kamerlingh Onnes mere nchọpụta a dị ịtụnanya na narị afọ gara aga. Nkà mmụta sayensị a ejiriwo helium mmiri mmiri mee ka mercury nwee ume dị ka onye na-akwa ụba. Taa, teknụzụ a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ MRI ma ọ bụ, na ụwa nke njem, na ụgbọ okporo ígwè Maglev nke Japan. Na ngwa ngwa, ụgbọ a nwere ike iru ọsọ ọsọ nke 580 km / h, iji jikọọ Tokyo ruo Osaka na ihe na-erughị otu awa.
Ụgbọ okporo ígwè ndị na-eme ka magnetik nke Japan jisie ike na ndekọ 590 km / h
Ụgbọ mmiri levitation electromagnetic nke Central Japan Railway ruru ọsọ nke 590 km / h n'oge 19 sekọnd n'oge ule.
Central Japan Railway Co na JR-Maglev Magnetic Holding Train setịpụrụ akụkọ ọsọ ụwa ọhụrụ na 590 km / h. Emere ngosi ... n'oge 19 Sekọnd naanị. Ọ bụ karịa ọnụ na 574,8 km / h nke French TGV, mere 3 April 2007. Ma na wiil ndị mara mma, ọ bụ eziokwu.
Ụlọ ọrụ Japan nọ na-eduzi obodo ndị dị na Uenohara na Fuefuki, n'ebe ọdịda anyanwụ Tokyo. O nweela ihe ndekọ nke mbụ 581 km / h, meriri na 2003. O nwekwara olile anya iji ruo 600 km / h anya.
Ọnụ ego zuru oke nke Japanese TGV dị na euro 65
GỤKWUO na http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/le-train-a-levitation-magnetique-japonais-bat-un-nouveau-record-a-590-km-h_1672418.html#esdEOAl6ktiW0rYx.99
Lexus na-enye vidio nke ụgbọ mmiri levitation ya sitere na Back to the Future
The okomoko automaker Lexus tọhapụrụ Tuesday a usoro nke videos featuring ọkachamara ọsọ na snow Ross McGouran eji a skateboard levitation ma ọ bụ "hoverboard" n'ike mmụọ nsọ Back na Future na a pụrụ iche skate park maka oge , na nso Barcelona.
The hoverboard bụ a na osisi site eji levitation ji site dike nke trilogy Back na Future, Marty McFly (n'Ịntanet Michael J. Fox), ga-esi nke a bechapu nke abụọ nwunye, wepụtara na 1989 na ihe o mere na ... 2015.
A na-eji mmiri mmiri mmiri na-eme ka ndị na-eme ihe na-adịghị mma mma
N'etiti Fans nke movies gwara site Robert Zemeckis, isiokwu aghọwo a òtù nzuzo, dị nnọọ ka akpụkpọ ụkwụ na saa onwe-ha, na ihe nile na-atụ anya na hoverboard adị n'ezie ndị 21 2015 October, ụbọchị Marty McFly ga disembark 1985.
Na videos bipụtara na-enyemaka nke Japanese automaker Toyota na YouTube n'elu ikpo okwu, ị pụrụ ịhụ Ross McGouran eji hoverboard, imewe, mma n'anya, nwere obere ka ọ na ihe nkiri ahụ, na a skate- ogige, nke na-adịghị anya site n'isi obodo Catalan, mere maka ememme ahụ ma jikọta okporo ígwè ndị na-ekwe ka igwe ahụ levitate.
Ngwa, ngwaọrụ ahụ na-emepụta oghere magnet nke na-enye ya ohere iwepụ site na ndị na-achịkwa àgwà ọma nke mmiri mmiri, nke na-emepụta obere ígwé ojii nke na-acha ọcha anwụrụ ọkụ gburugburu ngwaọrụ ahụ. A na-etinye usoro ihe ngosi na ogige ntụrụndụ, na setịpụrụ na-emepụta oghere magnet dị mkpa iji kwaga, kwuru na onye na-emepụta ihe na nkwupụta.
Nke a abughi oge mbu a vidiyo nke ụdị a apụtawo, ma ọ bụ na ọ dịghị ọkwa na ụlọ ọrụ agafela iji gosipụta ụdị ọrụ.
Na March 2014, otu ụlọ ọrụ, HUVr tech, kwupụtara ọkwa hoverboard, na-ewere ihe ngosi nke ihe nkiri ahụ.
A nkwado video, na-egosi na ọrụ na osisi-ese n'elu mmiri na ikuku, E duziri, metụtara ọtụtụ siri, tinyere na-agụ egwú Moby, ọkachamara skateboarder Tony egbe ma ọ bụ omee Christopher Lloyd, onye na-arụ ọrụ nke so nke Marty, Doc Emmett Brown, na trilogy.
Na-esote ụbọchị, satirical saịtị Funny ma ọ bụ Die ama ghọtara na ọ bụ a hoax. Na November nke Hendo ụlọ ọrụ, n'aka nke ya, mara ọkwa na ọ enweta a hoverboard ma ya osisi, kwadoro site na anọ okirikiri magnetik Motors, nwere ikike, dị ka Lexus ngwa ka levitate na conductive ebupụta, dị ka mpempe ígwè sliding, na-eji ogwe magnet.
Na 2012, ọ bụ onye na-eme egwuregwu ụmụaka bụ Mattel onye ketara akwụkwọ nke azụ azụ na Future, oyiri onye ụlọ ọrụ ya nyere ikikere kama ọ adaghị.